Xog-Ururin Muujisay Aragtida Ragga Iyo Dumarku Ka Qabaan Kootada Haweenka Somaliland Warbixin, Suxufiyadda Muna Maxamuud Saqadhi | Dhaymoole News
Xog-Ururin Muujisay Aragtida Ragga Iyo Dumarku Ka Qabaan Kootada Haweenka Somaliland Warbixin, Suxufiyadda Muna Maxamuud Saqadhi
August 15, 2016 - Written by wariye999
Hargeysa (Dhaymoole)- Ragga iyo haweenka Somaliland, ayaa fikir ahaan iska soo horjeeda marka ay timaado aragtida ah in kuraas Kooto ah haweenka laga siiyo golayaasha Qaranka.
Ra’yi ururin ay suxufiyadda Muna Maxamuud Saqadhi ka samaysay magaalada Hargeysa oo ay dadka wax kaga waydiisay aragtidooda tiro go’an oo kuraas dumarka looga qoondeeyo golayaasha Somaliland, waxa ka soo baxay is-diidanaan iyo kala duwanaanshiyo la xidhiidha arrintan.
Tiro dadweyne ah oo la waydiiyey su’aalo isku mid ah oo la xidhiidha sida ay u arkaan kootada haweenka, waxay ka bixiyeen jawaabahan.
“Waxaan la yabaa waxay dumarku ugu soo celcelyaan Kooto hana loo xidho, siyaasadduna maaha hadyad laysa-siiyo, waxay u baahantahay karti iyo dedaal, qofkana haddii wax la iska siiyo oo aannu cod ku iman waxba ma qaban karo ayey ka dhigantahay, waayo waa qof meel bilaa tacab ku yimid oo lama ogaan karo ilaa heerka uu wax goosan karo. Ta kale, dadka ayey ka midyihiin, waxay sheegaan inay la simanyihiin ragga, hadday nala simanyihiin ha tartamaan, dimuqraadiyaddaa sidaa ogol.” Sidaas waxa yidhi Mustafe Cali Jaamac.
Mr. Mustafe waxa kaloo uu intaa raaciyey in aannu habayaratee ogolayn kootada haweenka loo xidhayo ee looga baahan yahay inay tartamaan oo ay kasbadaan in raggu codkooda siiyaan, laakiin aanay u ogolayn kooto la iska siiyo.
Nin kale oo magaciisa ku soo koobay Siciid oo isna wax laga waydiiyey arrintan, ayaa ku jawaabay, “Aniga xaggayga dumarka in kooto loo xidhaa ceebay ka tahayba, iyagana ceebay ku tahay, dadka ugu badan ee coddeeyaana waa dumar iyo dhallinyaro, markaa iyagu xasadka ha iska daayaan oo ha soo xulaan shan hablood oo xul ah oo aqoon leh, hana u coddeeyan hadhawna golaha qaybtooday ka qaadanayaan.”
Haseyeeshee, Saleebaan Xaashi ayaa isagu qaba ra’yi ka soo horjeeda kuwaa hore, isla markaana soo dhaweeyey kooto go’an oo dumarka laga siiyo golayaasha qaranka, “Waan soodhawaynayaa fikirka ah in dumarka kooto loo xidho, sababtuna waxay tahay in haweenka iyo dhallinyaradu ay yihiin kuwa ugu codaynta badan markay doorasho timaado, mar walbana iyagu ay coddeeyaan, sidoo kale sannadba sannadkuu ka dambeeyo ayey si kordhaysaa doorka ay haweenku ku leeyihiin saaxadda siyaasadda, markaa waan soo dhawaynayaa fikirka ah haweenka ha loo xidho kooto 100/20 ama 100/30 inay ku yeeshaan dawladnimada aasaaskeeda oo qodab dastuuri ah laga dhigo ama xeerka dastuurka waafaqsan laga dhigo, sababtuna waxay tahay in la dhiirrigeliyo doorka muuqda ee soo kordhaya ee dumarku ku leeyihiin saaxadda siyaasadda,” ayuu yidhi Saleebaan.
Xamda Cabdillaahi oo ka mid ah dadka ra’yi ururintan wax laga waydiiyey, ayaa iyaduna gacmo furan ku soo dhawaysay sharci tiro go’an oo kuraas ah loogu xidho dumarka, waxaanay tidhi, “Anigu waan ku raacsanahay dumarka in kooto loo xidho, waayo dumarku waa inay xuquuqdooda helaan oo ragga la sinaadaan oo kuraastooda la siiyo, maxaa yeelay waxay raggu qaban karaa dumarkuna way qaban karaa.”
Mar la waydiiyey su’aal ku saabsan sababta dumarku u diidayaan inay tartamaan oo cod ku yimaadaan golayaasha dalka? Waxay ku jawaabtay, “Dumarka lama dooranayo oo waa la yasayaa, waxaana la odhayaa waxba ma qaban karaan, markaa waxaan rabnaa in kooto naloo xidho.”
Sidoo kale gabadh kale oo ka gaabsatay inay baahiso magaceeda, ayaa qabta fikirkan oo kale, iyadoo weliba aaminsan in dumarku ka karti iyo garashaba badan yihiin ragga, “Walow dumarku ay rag badan ka caqli iyo karti badan yihiin, hadda raggu way yasaan dumarka, markaa waan rabnaa in kooto na loo xidho.”
Hase ahaatee, nin magaciisa ku sheegay Axmed, ayaa isagu qaba fikir ka wada duwan kuwaa hore, isla markaana kaba soo wada horjeeda in dumarku ka qaybgalaan talada iyo doorashooyinka dalba, maadaama la isku khilaafsan yahay in dumarku maamul qabtaan.
Isagoo arrinta a ka hadlayeyna waxa uu yidhi, “Dumarku wax waa maamuli karaan, laakiin waa inay gurigooda maamulaan, waayo wax ka muhiimsan waxay doonayaan ayey haystaan, markaa anigu waxan qabaa inan dumarka guryooda laga soo saarin oo guryooda ku eekadaan. Markaa anigu waxaan qabaa dumarku in aanay doorashaba isu soo taagin, iskaba daa kooto loo xidhee, dumarkana waxaan kula talin lahaa inay iska daayaan waxan ay u ordayaan oo wax ka muhiimsan ayey hayaan ay guryahooda joogaan.”
Nin kale oo magaciisa ku sheegay Cabdirashiid, ayaa isna aaminsan aragti aad ugu dhaw taa hore, waxaannu soo jeediyey in aanay dumarku ka soo bixin guryahooda ee loo daayo.
Guud ahaan dumarka suxufiyaddu la kulantay waxay ka sinnaayeen fikirka ay ka qabaan kooto loo xidho kuraasta haweenka Somaliland oo dhammaantood ay soo dhaweeyeen, halka raggu badankoodu ka soo horjeedaa.
“Intii aan ku guda jiray ra’yi ururtan waxaan ogaaday badiba raggu inay diiddan yihiin kootada haweenka halka ay dumarku doonayaa oo ay soo dhawaynayaan,” ayey suxufiyaddu ku soo gunnaanaday warbixinteeda.